Home » Nepali Sex Stories » यसरी लुट्यो मेरो जवानी
आफ्नो जवानी सुम्पिएको भोलिपल्ट म बिहानै उठेर अफिस जान तयार भएँ । तर ममा त्यति उत्साह भने थिएन । तै पनि बल्लतल्ल आफैंलाई बेचेर भए पनि हासिल गरेको जागिर गुमाउन मन लागेन । खाना खाएर म अफिस पुगेँ । मलाई हाजिर पुस्तिका देखाइयो र हाजिर गर्न लगाइयो । अनि केही बेरमा उही सुपरभाइजर आयो र भन्यो, ‘तिमी हिजो मैले देखाएको साइटमा जाऊ, अहिले यहाँबाट गाडी जान्छ, त्यसैमा जानु ।’ अनि उसले मलाई दिपकले भनेअनुसार काम गर्नु भनेर अर्थ्यायो । मलाई अघिल्लो दिनको कुरा सम्झेर उसको मुख हेर्न निकै लाज लागिरहेको थियो । उसले मलाई कामबारे सम्झाउँदा मेरो मुहार जमिनतिर झुकेको थियो ।
केहीबेरमा हामी अफिसमै मोटर चढेर साइटतिर गयौं । खटाइएअनुसार काम गरेँ । मैले लेबरहरुको काम रेखदेख र मुल्यांकन गर्नुपर्ने थियो । तर मेरो वास्तविक काम यो नभएर उही सुपरभाइजरको यौन प्यास मेट्ने नै मुख्य काम हुने हो कि भन्ने चिन्ता मभित्र कताकता थियो । दिउँसो ऊ साइटमा आएर मलाई फेरि हेटौंडातिर लान्छ कि भन्ने भय थियो मेरो मनमा । त्यसैले म उ आउने बाटोतिर बारम्बार नजर लगाउँथे । तर चार बज्दासम्म ऊ आएन । अनि म ढुक्क भएर फर्किएँ । अफिस गएर दिनभरीको कामको विवरण भरेर म घर गएँ ।यसैगरी तीन दिन बित्यो । तर चौथो दिन हामीसँगै सुपरभाइजर पनि साइटतिरै लाग्यो । अफिसको मोटरमा चालक बस्ने एउटै लाइनमा सीट थियो, पछाडी सामान राख्ने र केही लेबर बस्नेगरी खुल्ला थियो । त्यसैले म सुपरभाइजर र इन्जिनियरसँगै बसेर जानुपर्ने भयो । मलाई ढोकापट्टी राखेर सुपरभाइजर बीचमा बस्यो अनि इन्जिनियर चाहीँ चालकछेउ बस्यो । बाटोमा सुपरभाइजरले मेरो स्तनमा कुहिनो दल्न खोज्दै थियो । तर मैले आफ्नो शरीर नै बंग्याएर झ्यालपट्टी फर्काएर जोगिने प्रयास गर्थेँ । ऊ इन्जिनियरसँग कुरा गर्दै मतिर ध्यान नदिएजस्तो गर्दै थियो । तर ऊ आफ्ना तिघ्राले मेरा तिघ्रा ठेल्ने गर्थ्यो । म केही पर सर्न खोज्थेँ तर ठाउँ नै थिएन । केही बेरमा उसले मेरो शरीर पछाडी सीटमा हात तेर्स्यायो । अनि झ्यालतिर हात पुर्याएजस्तो गरी उसले मेरा स्तनतर्फ औंला ल्यायो । उसले आफ्नो औंलाले मेरा स्तनलाई घोच्न थाल्यो । कुत्कुती लागेपछि मैले काखीचेप्दै उसका हातलाई पन्छाउन खोजेँ । उसलाई केही भनौं त इन्जिनियर र चालकका अगाडी त्यस्तो कुरा कसरी गर्नु ? नभनौं त ऊ मेरा स्तनलाई छेउतिरबाट दुई औंलाले निमोठ्न थालिसकेको थियो ।
नभन्दै जेको डर थियो, त्यही भयो । ‘उसले भन्यो कबिता, तिमी पनि हिडँ, तिमीलाई अरु काम पनि जिम्मा लगाउनु छ ।’ अफिसको काम भनेपछि जान्न भन्नु पनि कसरी ? जाउँ त उसले फेरि मलाई खेलौना बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता । रातोमाटे पुगेपछि इन्जिनियर उत्रियो । मलाई अब भने पक्का भयो, आज पनि मेरो शरीर लुटिन्छ भन्नेमा । बाटोमा केही कुरा नभएपनि इन्जिनियर उत्रिएपछि भने उसले मलाई भन्यो, ‘अस्तिकै ठाउँमा जाउँ, खाजा खाउँ अनि तिमी नयाँ साइट जाऊ ।’
भर्खर साढे ११ बजेको थियो, तीनबजेसम्मका लागि उसले मोटर पठाउनुको उद्देश्य कतै मसँग त्यतिन्जेल मस्ती गर्ने सोच पो बनाएको हो कि ? डर लाग्नु स्वाभाविक थियो । उसले खसीको तास, चिउरा र चिसो मगायो । अनि उसले आफ्नो लागि बियर पनि माग्यो । मैले अफिसको ड्युटीमा पनि सर त बियर खानुहुँदो रहेछ भनेर कुरा निकालेँ । उसले भन्यो, ‘थकाइ मेट्छ क्या ।’ मैले उसलाई फकाउने सोचले कुरा निकालेँ । ‘सर आज त अलि चाँडो घर जानुपर्ने थियो ।’ उसले सोध्यो, ‘किन ?’ मैले भनेँ, ‘घरमा काम छ, आमा बिरामी हुनुहुन्छ ।’
भरे जाँदा बरु म पनि सँगै जान्छु नि, भाउजुलाई डाक्टरको लैजानुपरे म लैजाउँला, त्यसको तिमी चिन्तै नगर ।’ उसको जवाफ थियो ।
loading... Related Posts	अनिताको चाकमा पनि चिकियो	Erotic Nepali Sex Story ब्वाईफ्रेन्ड को अगाडी सर सँग चिक्दा	आफ्नै बाउले रन्डि बनायो	About The Author